Usuku Lwezingulube: luyini, lugujwa nini kanye nokubaluleka kwalo | Green Renewables
IsiJalimane Portillo | 04/05/2022 12:00 | Izaziso
Kuze kube namuhla, sonke sazi okuningi noma okuncane mayelana nabadumile usuku lwe-groundhog. Ezimweni eziningi, lokhu mhlawumbe kungenxa yefilimu kaBill Murray ethi Stuck in Time. Nakuba kuwumcimbi othandwa kakhulu e-United States, umcimbi weqe imingcele. Singajabulela nokubikezela kuka-Groundhog Phil ezindabeni zanamuhla zase-Europe. Lokhu kungenye yamasiko athakazelisa kakhulu futhi alindelwe isikhathi eside eMelika.
Ngakho-ke, sizonikezela lesi sihloko ukuze sikutshele konke odinga ukukwazi mayelana noSuku lwe-Groundhog nokubaluleka kwalo.
1 usuku lwe-groundhog
2 Lunini usuku lwe-Groundhog
3 kugujwa kuphi
5 Usuku lwe-Groundhog e-Penxutonne, ePennsylvania
Leli isiko elithakazelisayo lamasiko aseMelika. Ukuze siqonde i-Groundhog Day nokuthi isho ukuthini, kufanele sibuyele emuva ngesikhathi. Eqinisweni, umsuka wayo uphakathi EYurophu, ikakhulukazi e-Candelaria. Phakathi nalomkhosi, kunesiko lenkolo lapho abapristi besakaza amakhandlela.
Ngalesi sikhathi kwakuthiwe uma izulu likhanya ekuseni, ubusika buyoba bude. Lesi siko sadlulela kumaJalimane, anezela ukuthi uma ilanga liphakeme, noma iyiphi i-hedgehog yayingabona isithunzi sayo. Ekugcineni, isiko lasakazekela eMelika. Cishe ngo-1887, abalimi base-US kwakudingeka babikezele ukuthi ubusika buzophela nini ukuze bazi ukuthi benzeni ngezitshalo zabo, futhi balijwayela leli siko ngokulishintsha kancane.
Ukuze benze lesi sibikezelo, banquma ukuthembela ekuziphatheni kwezilwane. Ngakho-ke ingulube yaphenduka yaba inkomba yakhe eyinhloko. Babona indlela eyayiziphatha ngayo ngemva kokulala base benquma ukuphela kobusika ngokusekelwe kukho. (Abantu be-Game of Thrones kungenzeka ukuthi bakutholile...)
Kukholelwa kakhulu ukuthi lapho i-groundhog iphuma emgodini, iphendula ngezindlela ezimbili ezahlukene. Uma ingasiboni isithunzi sayo ngenxa yokuthi inamafu, izowushiya umgodi wayo futhi maduzane kwasebusika. Noma kunjalo, uma libalele, ingulube izobona isithunzi sayo bese ibuyela emuva iyocasha emgodini. Indlela yesibili isho ukuthi kusamele silinde amasonto ayisithupha ukuze ubusika buphele.
Nokho, ngenxa yefilimu kaBill Murray okukhulunywe ngayo ngenhla, i-Groundhog Day yaba nenye incazelo. Kule movie, umlingiswa oyinhloko uhlala enamathele ngosuku olufanayo. Kungakho, kwabaningi, usuku luhlotshaniswa nokwenza into efanayo usuku nosuku ngendlela ewumshini noma eyisicefe.
Lunini usuku lwe-Groundhog
Lesi siko sigujwa kulo lonke elase-United States naseCanada, nakuba lidume kakhulu ePunxsutawney. Kuhlala i-groundhog edumile, uPhil. Isilwane esithandwa kakhulu futhi minyaka yonke bayasikhipha emgodini waso ukuze bahlole ukuziphatha kwaso. Uyazibuza ukuthi lunini usuku lwe-Groundhog? Lolu suku luphawula cishe uhhafu phakathi kwe-solstice yasebusika kanye ne-spring equinox. Ngakho-ke, Lolu suku lugujwa ngoFebhuwari 2 minyaka yonke.
Lesi siko sigujwa e-United States naseCanada. I-Groundhog Day, ebizwa ngokuthi i-Groundhog Day ngesiNgisi, isiko elidumile. NgoFebhuwari 2, bonke abantu baseMelika basilindele ngabomvu isiprofetho sikaPhil the Groundhog. Kodwa-ke, abantu abaningi esifundeni banezimbila zabo ukuze bazenzele ezabo izibikezelo eziqondile.
Impela ekugcineni kwalokhu okuthunyelwe uzobe uzibuza ukuthi baqinisile yini. Ngokumangalisayo, izilinganiso zinokunemba okuphakathi kwama-75% nama-90%. Ngale ndlela singenza isiqiniseko sokuthi, ezimweni eziningi, amasiko adumile angasebenza njengereferensi yokubona ukuthi singakanani isikhathi esisele sokuqeda ubusika.
Kunezimbila eziningana ezidumile eCanada: UBrandon Bob, uGary the Groundhog, uBalzac Billy noWiarton Willie, nakuba i-Nova Scotian San kuthiwa ine-prognosis ephakeme kakhulu.
Noma kunjalo, kukhona amabhendi, amabhanela, ukudla, nobumnandi kuyo yonke imigubho. Bengilokhu ngilindele ngabomvu ukuthi isibikezelo salo nyaka sizoba yini.
Usuku lwe-Groundhog e-Penxutonne, ePennsylvania
Nakuba izwe ngalinye eligubha lolu suku line-groundhog yalo, enye yezindawo ezinenani elikhulu labahlanganyeli i-Punxsutawney (Pennsylvania), isiko eligcinwe kusukela ngo-1887, abacabangela i-Punxsutawney Phil Just groundhog esemthethweni lapha.
Abantu abaningi basuka ezifundeni ezihlukene ukuze babambe iqhaza emicimbini yosuku lwe-Groundhog ehlelwa yi-Punxsutawney Groundhog Club. Ngalolo suku ngokuvamile abantu abagqoke ama-tuxedo nezigqoko eziphezulu babonakala bejabulela umcimbi phakathi komculo nokudla.
Njalo ngoFebhuwari 2, izintatheli, izivakashi namalungu ekilabhu ayahlangana ukuze alinde u-Phil ukuthi avele futhi anikeze isibikezelo sezulu.
Kuthiwa le ngulube yaqamba igama layo ngokuhlonipha iNkosi uPhilip, uMbusi wase-Edinburgh, futhi kungakhathaliseki ukuthi kuyiqiniso noma cha, ishiya ikhaya layo e-Gobbler's Knob endaweni yasemaphandleni eduze nedolobha. ngonyaka ngoFebhuwari 2 ukuxwayisa ngesithunzi sakho ukuthi isimo sezulu sizoba njani.
Uma Phil ebuyela emhumeni lapho ebona ithunzi, kuba amanye amasonto ayisithupha ebusika. Ngakolunye uhlangothi, uma ungayiboni, intwasahlobo izofika.
UPhil waziwa kakhulu ngefilimu yakhe yango-1993 ebizwa ngokuthi i-Groundhog Day, eyaholela ekuveleni kukaGroundhog ku-Oprah's Show ngo-1995. Uphinde wafakwa endimeni yochungechunge lwe-MTV.
Isithunzi sakhe sakhula kangangokuthi ngo-2013, umshushisi wase-Ohio waze wambeka icala "lokuqamba amanga kwasekuseni," efuna isigwebo sentambo, futhi kwakhishwa izincwadi ezimbili zokuboshwa ngenxa yokubikezela okungamanga (2015 kanye no-2018).
Kungaba mnandi ukuhambela eminye yale micimbi futhi uyibone bukhoma, kodwa njengoba kungeyena wonke umuntu ongakwenza, kuzomele siqhamuke nokuthile: shicilela indaba kaPhil, bukela imuvi elimele noma vele unikeze izindaba ezijabulisayo zosuku lwegundane lomhlaba.
Njengoba ubona, i-Groundhog Day inemvelaphi nokubaluleka kwayo emandulo nanamuhla. Ngithemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana ne-Groundhog Day, yiziphi izici zayo, ukuthi ibaluleke kangakanani nokuthi igujwa kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » General » Izaziso » usuku lwe-groundhog
Imibono yokusebenzisa kabusha